sailulin..စိုင်းလုလင်။၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ ဆိုဒ်မိသားစု၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းအတွက် ကုသိုလ်ဖြစ် ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါရန် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
Maleမင်းဘူး.စကုမြို့နယ်။Myanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ sailulin..စိုင်းလုလင်။'s Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
7:58pm အချိန်April 14, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း
နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်မတို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ
Friends18.com Happy Birthday Scraps
Friends18.com Happy Birthday Scraps 6:19pm အချိန်May 26, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာန
Music Playlist at MixPod.com မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
mintun ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Thant Zin Tun ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ဖိုးကံထူး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား
ဆရာတော် ပြပေးနေတဲ့ ၀ိပဿနာတရားရှုပွားသူ ဘယ်လောက်များများရှိပါသလဲ
ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲ
“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။
သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး
နက်နဲထူးဆန်း မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်တန်း မှတ်စုများ
“ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းသူနှင့်သာ ပေါင်းဖော်ပါ”
ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဘယ်သူကပိုမိုဆိုးသလဲ
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌ အပြောရ အသိရ အခက်ဆုံးတရားဆိုတာ ဘာလဲ
တစ်ရက် နဲ့တစ်ရာ
လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။
ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ
“သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါး (တရားအားထုတ်ခြင်း လုံ့လ လေးမျိုး)”
ဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..
3. စိတ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲ
5. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
6. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။
10. ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
11. ** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **
12. တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
14. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
17. အလှူပွဲကြီး အောင်ပါပြီ.............
18. စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)
19. အဘိဓမ္မာ ပိဋက သမိုင်း အပိုင်း(၁)
20. " မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ရောနှောလောင်းလှူသည့်ဆွမ်း"
Top News · Everything ဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဘယ်သူကပိုမိုဆိုးသလဲ'"ကျေးဇူးပါအကို ခေါင်းစဉ်လေးဆွေးနွေးချင်တယ် ဒိ၂ခုကြောင့်လဲဘာသားခြားတွေးတိုခိုက်တာခံနေရသလို…"1 minute agomintun သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။3 minutes agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဆရာတော် ပြပေးနေတဲ့ ၀ိပဿနာတရားရှုပွားသူ ဘယ်လောက်များများရှိပါသလဲ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို"8 minutes agoဖိုးကံထူး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'"ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲအကို ဖတ်လိုက်၇တာရင်ထဲယုံကြည်ချက်တော့ရှိလာတယ်"18 minutes agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲ'"တယ် တန်ဖိုးရှိလှပါလားဘု၇ား အလုပ်သမားသတ်သတ်သာ"28 minutes agothatnaing, မြတ်ကိုကိုဟန် and thetnaungmawgyun joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺30 minutes agoဖိုးကံထူး commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မနေသူတွေထဲမှာ နေပါ..'"တင်ပါ့ဘုရား မလွတ်သေးပါဘူးဘုရား"32 minutes agoဖိုးကံထူး commented on thein wai's blog post '“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။'"သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဘုရား"41 minutes agodimplemit leftacomment for စည်သူ"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"1 hour agodimplemit leftacomment for ကိုမင်း"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"1 hour agoAungMyintMyat postedaphoto မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး။1 hour ago 0
kham liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မနေသူတွေထဲမှာ နေပါ..'3 hours ago More... RSS